Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Manchester United Oo Dalab Ka Gudbisay Jadon Sancho, Pogba Oo Ka Dhawaajiyay Xog Cusub, Mustaqbalka Ilkay Gundogan Iyo Qodobo Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Manchester United oo dalab ka gudbisay Jadon Sancho, Pogba oo ka dhawaajiyay Xog Cusub, Mustaqbalka Ilkay Gundogan iyo Qodobo kale
June 11, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Georginio Wijnaldum ayaa sharaxaad ka bixiyay go’aankiisa uu ugu biirayo Paris Saint-Germain ka dib bilooyin uu xiriir xoogan la lahaa kooxda La Liga ka dhisan ee Barcelona waxana uu sababta ku sheegay in tobaraha PSG uu si shaqsiyan ah ula soo xiriiray.
PSG ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa Wijnaldum khamiistii, iyadoo heshiiska ciyaaryahanka khadka dhexe ee Parc des Princes la dhameystiri doono marka qandaraaskiisa Liverpool uu dhacayo dhamaadka bisha. Goal
Liverpool ayaa indhaha ku heysa Sergej Milinkovic-Savic si ay ugu buuxiso booska Georginio Wijnaldum kadib markii uu ku biiray Paris Saint-Germain – sida laga soo xigtay Il Messaggero .
Daafaca bidix ee Liverpool Kostas Tsimikas ayaa xiiso ka helaya kooxda Fenerbahce – sida laga soo xigtay Fotomac .
Roy Keane ayaa ku booriyay Manchester United inay iska bixiso £ 120 million ($ 170m / € 140m) si ay ula soo saxiixato Harry Kane, inkastoo uu sidoo kale qirtay inuu shaki ka qabo xirfada hogaamineed ee weeraryahanka Tottenham. SkyBet.
Barcelona ayaa dareenkeeda u jeedisay xiddiga khadka dhexe ee kooxda Roma Lorenzo Pellegrini – sida laga soo xigtay Mundo Deportivo .
Manchester United ayaa laga soo diiday dalab ku kacaya 67 million ($ 95m) oo ay ku doonayeen Jadon Sancho. Goal
Lazio ayaa u aqoonsatay weeraryahanka Atalanta Josip Ilicic inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida laga soo xigtay Corriere dello Sport .
Arsenal ayaa isha ku heysa daafaca midig ee RB Leipzig Tyler Adams – sida laga soo xigtay The Athletic .
Goolhayaha Torino Salvatore Sirigu ayaa xiiso ka haleya kooxda Juventus – sida ay warinayso Calcio Mercato .
Paul Pogba ayaa sheegay inuusan wali wadahadal la galin Manchester United mustaqbalkiisa isla markaana uusan wax dalab ah oo la taaban karo ka helin kooxda. RMC Sport
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Anderlecht Albert Sambi Lokonga ayaa waxaa xiiseynaya kooxda Arsenal – sida laga soo xigtay Sudinfo .
Milan ayaa heshiis la gaartay weeraryahanka Chelsea Olivier Giroud – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Marseille ayaa u aqoonsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Philippe Coutinho inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida ay qortay Mundo Deportivo .
Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Napoli Fabian Ruiz – sida laga soo xigtay AS .
Garabka kooxda Bayer Leverkusen Paulinho ayaa u furan inuu u dhaqaaqo midkood Premier League ama La Liga mustaqbalka. Goal
Manchester City ayaan qorsheyneynin inay iibiso Ilkay Gundogan inkastoo ay jiraan warar lid ku ah, sida laga soo xigtay Sky Sports.
Manchester United ayaa heshiis shaqsi ah la gaartay garabka kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho, sida laga soo xigtay Fa brizio Romano.
Arsenal ayaa iska iibin doonta Eddie Nketiah xagaagan hadii aysan heshiis cusub la gaari karin weeraryahankaan, sida laga soo xigtay The Athletic.
Juventus ayaa xiiseyneysa saxiixa weeraryahanka Tottenham Hotspur Harry Kane, sida laga soo xigtay Calciomercato .